မက္ကာသို့ခရီးသွားခြင်း၏စိန်ခေါ်မှု | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | အာရှခရီးသွားခြင်း
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကြားသိကြပြီ မက္ကာ"မက္ကာသို့ခရီးစဉ်"၊ "မက္ကာသို့သွားခြင်း" နှင့်တူသောစာပိုဒ်တိုများဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအနည်းငယ်သာထိုနေရာတွင်အမှန်တကယ်သွားသူတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးသည်။
ထိုအကြောင်း မက္ကာသည်မွတ်စ်လင်မ်များအတွက်သာဖြစ်သည် အကယ်၍ ၎င်းသည်အစ္စလာမ်မဟုတ်လျှင်သင်၏ဘာသာတရားဖြစ်လျှင်ထိုစကားစုကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အကွာအဝေးများကိုသိမ်းဆည်းခြင်း၊ မက္ကာသို့ခရီးသွားခြင်းသည် Camino de Santiago ဖြစ်သည်၊ တမူထူးခြား။ မမေ့နိုင်သော၊ မမေ့နိုင်သောဘုရားဖူးသွားခြင်းဖြစ်သည်။
နိယာမအားဖြင့်၎င်းသည်သင်ဖြစ်သည် ဆော်ဒီအာရေဗျ၌တည်ရှိသောမြို့။ ဤတိုင်းပြည်သည်အာရေဗီယန်ကျွန်းဆွယ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဂျော်ဒန်၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ ကာတာ၊ ယီမင်၊ အိုမန်နှင့်ပင်လယ်နီ။
အစ္စလာမ်အတွက်နက်ရှိုင်းစွာအရေးကြီးသောမြို့ကြီးနှစ်မြို့ရှိသည် သန့်ရှင်းသောပြည်ဖြစ်၏။ ငါမက္ကာအကြောင်းကိုပြောပေမယ့်မက်ဒီနာ၏။ ၂၀ ရာစုနှစ် ၃၀ အတွင်းရေနံရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကတိုင်းပြည်သည်အသွင်ပြောင်းပြီးသင်သိသည့်အတိုင်းယနေ့westernရိယာသည်အနောက်တိုင်းနှင့်အရင်းရှင်လူနေမှုပုံစံစသည့်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
မက္ကာသည်အစ္စလာမ်၏အသန့်ရှင်းဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးထိုအကြောင်းကြောင့်ပင် ဤဘာသာတရားကိုမကျင့်သုံးသူသည် ၀ င်ခွင့်မပြုပါ။ သို့သော်ငြားလည်း မွတ်စလင်တိုင်းသည်သူ၏ဘ ၀ ၌တစ်ချိန်ကပင်မက္ကာသို့ဘုရားဖူးသွားရန်ရှိသည်။
ဒီခရီးစဉ်ကိုခေါ်တယ် ဟာ့ဂ်ျ ၎င်းသည်အစ္စလာမ်သာသနာငါးရပ်တွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ မွတ်စ်လင်မ်အရွယ်ရောက်သူတိုင်းသည်ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ခရီးသွားရန်ငွေရှိလျှင်၎င်းင်း၏ကျန်းမာရေးကခွင့်ပြုလျှင်လည်းကောင်းထိုသို့ပြုလုပ်သင့်သည်။ ဆင်းရဲသောမိသားစုများသည်အမြဲတမ်းတတ်နိုင်သလောက်မတတ်နိုင်ကြသဖြင့်ခရီးစဉ်ကိုအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး တည်းပင်ဝင်နိုင်အောင်ငွေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။
El ဟာ့ဂ်ျ သာလအတွင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ် Dhu to-ဟီဂျဂျာ ဒါကြောင့်ဘုရားဖူးစေထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ ဘီလီယံနှင့်ချီသောကိန်းဂဏန်းများအရလူ ဦး ရေနှစ်သန်းကျော်သည်ဆော်ဒီအာရေဗျသို့ထိုနေ့သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။
မွတ်စလင်ဘာသာ ၀ င်မွတ်စ်လင်မ်များ၊ ကရာဘား၊ မီနာ၊ အာရာဖတ်တောင်တန်းနှင့်ယာဘရာရာမာ၊ မိုဟာမက်မှလွန်ခဲ့သောနောက်ဆုံးတရားဟောချက်ကိုပေးခဲ့ပြီးသူ၏အဖော်များကိုသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့သည်။ သူသွားရာနေရာ၊
အကယ်၍ ဒီဘုရားဖူးကိုနောက်ထပ်လတစ်လမှဖြစ်မယ်ဆိုလျှင်အမရာကိုအခြားအမည်ဖြင့်သိကြပါတယ်။ မက္ကာသည်သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတမန်တော်မိုဟာမက်အားပထမဆုံးအကြိမ်ဖော်ပြသောနေရာဖြစ်သည်။.
Kaaba နှင့်၎င်း၏ဝန်းကျင်တွင်အချိန်ကာလ၏မူလအစ၌ပျောက်ဆုံးသွားသောပုံပြင်များပါရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အာဒံကိုမက္ကာတွင်မြှုပ်နှံခြင်းသို့မဟုတ်အာဗြဟံ၏ဖခင်အီဘရာဟင်သည်သူ့သား hma ရှမေလနှင့်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အထူးဗီဇာထုတ်ပေးသည် ဘုရားဖူးခရီးစဉ်အတွက်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမွတ်စလင်မ်များသည်သံရုံးများသို့ချဉ်း ကပ်၍ ၎င်းတို့အားလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ၎င်းသည်စာရွက်စာတမ်းများစွာရှိပြီးခရီးသွားထံမှအလွန်တင်းကျပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတောင်းဆိုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဆလင်အမျိုးသမီးများသည်အသက် ၄၅ နှစ်နှင့်အထက်မရှိလျှင်အုပ်ထိန်းသူအဖြစ်ထမ်းဆောင်သောအမျိုးသားနှင့်အုပ်စုနှင့်၊ ခင်ပွန်း၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ခရီးမသွားဘဲအမျိုးသားနှင့်အတူဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သွားသင့်သည်။
တိုင်းပြည်တိုင်းကိုသီးခြားသတ်မှတ်ထားသောဘုရားဖူးဗီဇာများကိုသတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ဤနံပါတ်သည်ထိုနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောမွတ်စ်လင်မ်အရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ လများအတွင်းခရီးသွားလာသူအရေအတွက်ပေါ်မူတည်သည်။ စိတ်ကူးကသန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေအများကြီးမရှိဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကပရမ်းပတာဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်။
မွေးဖွားလာသူတစ် ဦး သည်မွတ်စ်လင်မ်ခရီးသွားနိုင်ပါသလား။ အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ က မွတ်စလင်မဟုတ်သူများသည်မက္ကာမြို့မှ ၁၅ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိသည် နှင့်မက်ဒီနာ။ မယုံကြည်မှုကိုပိုမိုနီးကပ်စွာတွေ့ရှိပါကသူသည်ပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးခံရခြင်းခံရနိုင်သည်။
သန့်ရှင်းသော ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်များသို့လည်ပတ်ရန်သင်သည်မွတ်စလင်၊ မွေးဖွားခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းခံရသည်။ သို့သော်ဒုတိယဖြစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့လျှင်ဗီဇာလျှောက်လွှာတွင်ရှင်းလင်းရမည်။ အစ္စလာမ်စင်တာမှမူစလင်ဘာသာရပ်သင်ကြားရေးတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်းလက်မှတ်ကိုတင်ပြရမည်။
ချက်ချင်း မက္ကာကိုဘယ်လိုသွားမလဲ။ အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းက လေယာဉ်ဖြင့် ဂျေဒါ။ ဒီမြို့မှာမက္ကာကိုဟဂ်ျဘုရားဖူးဖို့ဒါမှမဟုတ်ဘုရားဖူးဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရှိတယ်။ ဒါ ပင်လယ်နီ၏ကမ်းခြေပေါ်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုသူပိုင်တယ် အများဆုံးမြို့သားနှင့်အတူဒုတိယမြို့.
မှ ဂျီဒဟ် la မက္ကာ သို့မဟုတ်မက်ဒီနာသည်နာရီအနည်းငယ်ကွာဝေးသည်။ ထိုတွင်ကား၊ ကား၊ အဝေးပြေး၊ ကား၊ ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီသည် SAPTCO ဖြစ်သော်လည်းစင်းလုံးငှားအမျိုးအစားဘတ်စ်ကားများစွာကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Jeddah တွင်ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာရောနှောပြီးနောက်တစ်ခုမှာမွတ်စလင်များအတွက်သာ Haram al Sharif ဖြစ်သည်။ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်ရဲစခန်းတစ်ခုရှိပြီးမွတ်စလင်မဟုတ်သူများရှိသည်။ တိုတိုပြောရရင်လူတွေဟာကားတွေ၊ ဘတ်စ်ကားတွေနဲ့အသေးစားဗင်ကားတွေမှာသွားကြတယ် သူတို့ကစျေးမကြီးဘူး၊ မင်းမှာအာရဗီနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုင်းဘုတ်တွေရှိတယ်
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ မြေအောက်ရထားသည်ခေတ်သစ်လိုင်းငါးခုဖြင့်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးစနစ်ကိုမြင့်မားသောဆိုဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ထို့ကြောင့်အနာဂတ်တွင်မူရွေ့လျားမှုသည်ပိုမိုမြန်ဆန်။ မြန်ဆန်လိမ့်မည်။
၎င်းကိုမတူညီသောကုန်းလမ်းဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ဥပမာဒမတ်စကတ်မှပင်လယ်နီကမ်းရိုးတန်းအထိဖြစ်သည်။ ဆော်ဒီနှင့်အနီးဆုံးဆွာဟီဘန်မြို့သည်တဘူးဖြစ်ပြီးနယ်စပ်တွင်ရဲများကသတိကြီးစွာထားကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နိုင်ငံခြားသားများသည်အလုပ်ရှာရန်နှင့်ဘုရားဖူး၏အကြောင်းပြချက်နှင့်လိမ်လည်ခြင်းကိုမလိုချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်သည်ပတ်ပတ်လည်လက်မှတ်နှင့်ငွေများကိုတင်ပြရမည်။ သင်ခေါ်သောအထူးအေးဂျင့်ကိုပင်ငွေပေးရမည် လွိုင်ကော်, မက္ကာမှာနေရာထိုင်ခင်း, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, လမ်းညွှန်နှင့်အခြားအကူအညီများကိုဂရုစိုက်။
မှ Tabuk တ ဦး တည်းမက်ဒီနာသို့ခရီးစဉ်ကိုဆက်လက်နိုင်ပါတယ်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်သည်မက္ကာမှ ၆၂၂ ခုနှစ်တွင်သူ၏လှုပ်ရှားမှုများအားငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးနောက်သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဤတွင်အစ္စလာမ်၏အုတ်မြစ်ချခြင်းနှင့်နေရာဖြစ်သည် မိုဟာမက်၏သင်္ချိုင်းရှိသည်။ မက်ဒီနာသည်မိုဟာမက်၏မြို့ဖြစ်သော်လည်းမက္ကာသည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူတွေမ ၀ င်နိုင်လို့ပါ။ များစွာသောထိန်းချုပ်မှုများအမြဲရှိသည်။ တာဝန်ရှိသူများထံလည်ပတ်ပြီးနောက်ဘုရားဖူးများသည်မက္ကာသို့သဲကန္တာရကိုဖြတ်ကျော်ရန်အကွာအဝေးတက္ကစီစီးတတ်ကြသည်။
မက္ကာမှာဟိုတယ်အများကြီးရှိတယ်အမျိုးမျိုးသောဟီလ်တန်ပင်လျှင်စျေးနှုန်းကွဲပြားနိုင်သည်။ ဟိုတယ်သည် Sacred ဗလီနှင့်နီးလေလေ၊ ဈေးနှုန်းများလေလေဖြစ်သည်။ မြို့၏အလွန်ကောင်းသောရှုခင်းများနှင့်အလွန်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများပင်ရှိသော်လည်းစျေးနှုန်းများကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ဤပုံရိပ်များနှင့်ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြပြီ။ မက္ကာမှာတိုက်ပွဲများနှင့် squashed လူအစုအဝေး။ ဒါမှန်ပါတယ်၊ မကြာခဏဖြစ်ပျက်တာတွေအားလုံးပါပဲ။ လူနှစ်သန်းသုံးသန်းကိုအတူတကွမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
မည်မျှပင်ထိန်းချုပ်သည်ဖြစ်စေအရေးပေါ်အခြေအနေကိုကာကွယ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလူရာပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ရသည့်ကာဘား၊ ကျော်ကြားသောအနက်ရောင်တုံးနှင့်လမ်းပေါ်ရှိတံတားဟောင်းများနှင့်တံတားအသစ်များပေါ်၌လည်းသေဆုံးခဲ့သည်။
သန်းနှင့်ချီသောလူများသည်သုံးမိုင်အကွာအကွာအဝေးရှိ Muzdalifah မှသဲကန္တာရထဲမှလူတစ် ဦး သည်မိုဟာမက်၏စာတန်အားအရှက်ရစေခြင်းငှါသန့်ရှင်းသောနေရာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရွှေ့ပြောင်းကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံဒီရေစီးဆင်းသည်၊ အခြားအချိန်များတွင်မူဘ ၀ သည်သူ့ဟာသူကဲ့သို့ ...
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာရှခရီးသွားခြင်း » မက္ကာသို့ခရီးသွားခြင်း၏စိန်ခေါ်မှု